Bata nesu - Hebei Kingmetal Flange Uye Inokodzera Kugadzira Co, Ltd.
Zvigadzirwa zvedu zvinotumirwa pasi rese. Makasitoma edu anogara achigutsikana neyakavimbika mhando, masevhisi-anotungamira masevhisi uye nemakwikwi mitengo. Basa redu ndere "kuenderera mberi nekuwana kuvimbika kwako nekuzvipira kuyedza kwedu kugadziridzo yezvigadzirwa nemasevhisi edu kuitira kuti tigone kugutsikana nevashandisi vedu vekupedzisira, vatengi, vashandi, vanotengesa uye nharaunda dzenyika dzatinobatira pamwe".
xizhaotong maindasitiri paki, shijiazhuang guta, hebei, china
Vashandi vedu vanonamatira kune "Kuvimbika-kwakavakirwa uye Inopindirana Yekusimudzira" mweya, uye tenet ye "Yekutanga-kirasi Quality neakanaka Service". Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi vese, isu tinopa zvakagadziriswa & zvakagadzirirwa masevhisi kubatsira vatengi kuzadzisa zvinangwa zvavo zvinobudirira. Gamuchirai vatengi kubva kumba nekune dzimwe nyika kufona uye kubvunza!
Ndokumbira kuti ubate nesu nekutitumira maemail kana kutifonera kana iwe uine chero mibvunzo nezvekambani yedu. iwe unogona zvakare kuwana yedu kero info kubva kune yedu peji rewebhu uye uuye kukambani yedu kuzowana munda ongororo yezvatakatengesa. Tine chivimbo chekuti tichagovana pamwe chete nekugadzira hukama hwakasimba hwekudyidzana nevamwe vedu mumusika uno. Tiri kutsvaga kumberi kubvunza kwako.
INOWANIKWA NA9AM KUSVIRA 6PM